MGR GABRIEL RANDRIANANTENAINA: Eveka vaovaon’ny Diosezin’ny Tsiroanomandidy – Free News
mardi, 21 septembre 2021 - 8:01
Antananarivo, MGA 5	℃
Ny Evekan’ny Diosezin’ny Tsiroanomandidy, Mgr Gabriel Randrianantenaina.
Accueil/Songadim-baovao/MGR GABRIEL RANDRIANANTENAINA: Eveka vaovaon’ny Diosezin’ny Tsiroanomandidy
Lucien R. 12 juillet 2021
Fotoana lehibe sady manan-danja ho an’ny finoana Katolika ny andro omaly, izay nanamasinana sy nametrahana ny Mopera Gabriel Randrianantenaina ho evekan’ny Diosezin’ny Tsiroanomandidy, izay vao notendren’ny Papa Ray masina tamin’ny 30 Aprily 2021 teo. Sorona masina lehibe no nentina nanatanterahana izany, izay notarihin’ny Kardinaly Mgr Desiré Tsarahazana, notrononin’ny solotenan’ny Papa Ray Masina sy ireo Eveka ary ny mpitarika raharaha Masina ao amin’ny diosezy, tao amin’ny Kianjaben’ny Lisea Teknikan’I Tsiroanomandidy. Nandritra izany no namakiana ampahibemaso ny taratasy avy any Vatican nanendry azy ho Eveka, ary koa, nanolorana azy ireo fitaovana maha eveka azy ao amin’ity Diosezy ity.
Tsara ho fantatra fa ny tenany no Eveka fahefatra ao amin’ny Diosezin’i Tsiroanomandidy, nisolo an’i Gustavo Bambino Espino izay votendry hiandraikitra ny Diosezin’i Maintirano ny taona 2017. Taorian’io daty io, tsy nanana Eveka intsony ity Diosezy ity raha tsy izao. Raha tsiahivina, ny Mgr Ange Martinez (9 Apr 1959 – 30 Jolay 1977), Mgr Jean Samuel Raobelina (27 Apr 1978 – 30 Jiona 2001), ary i Mgr Gustavo Bombino Espino (4 Oktobra 2003 – 8 Feb 2017) no eveka efa niandraikitra ity Diosezin’I Tsiroanomandidy ity.
Ny mombamomba azy
Teraka tamin’ny 16 febroary 1969 tao Tanambe Ambatondrazaka ny Mgr Randrianantenaina Gabriel. Ny taona 1984 izy no niditra tao amin’ny Seminera zandriny tao Ambatondrazaka ihany. Ny taona 1990, nanohy ny fiofanana maha pretra azy tany amin’ny seminera zokiny tany Antsirabe sy teto Antananarivo ny tenany. Ny 31 Mey 1997 kosa izy no nohamasinina ho pretra. Teo anelanelan’ny 2003-2010, niandraikitra ny distrika Anosibe An’Ala izay ao amin’ny diosezin’i Moramanga izy ary nisafidy ho isan’ireo pretra diosezianina ho an’ity diosezy vaovao ity izy ny taona 2006. Efa recteur tao amin’ny seminera tao Moramanga izy ary mpiandraikitra ny distrikan’Anosibe An’ala. Ny taona 2016 hatramin’izao, sekretera mpandrindra ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara ny Mgr Randrianantenaina Gabriel. Marihina fa nitana andraikitra goavana ihany koa izy nandritra ny famangian’ny Papa François an’i Madagasikara ny taona 2019 satria izy no niandraikitra ny serasera sy ny fifandraisana tamin’ireo mpanao gazety.
Fahitalavitra sy Onjampeo maro no nampita mivantana ny fotoana omaly. Tonga tany an-toerana nanome voninahitra ny fotoana kosa ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Ntsay Christian, izay nisolo tena ny Filohan’ny Repoblika, ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC), ny Filohan’ny Fampihavanana malagasy, ny Governoran’i Bongolava, ny Solombavambahoaka sy ireo vahiny manan-kaja maro.
VAKY FONJA FARAFANGANA : Gadra 38 azo sambo-belona, 20 lavo, 31 mbola karohina
Zandarimaria – Etazonia : Hamafisina ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta
PRESOMPTION D’INNOCENCE: “Tsy hoe rehefa avoakan’ny mpanao gazety dia meloka”